Xeeladaha Dhismaha Xiriirinta ee 5 ee ugu sarreeya (Tusaaleyaal) | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/5-ta ugu Sarreysa ee Xeeladaha Dhismaha Xiriirinta (Tusaaleyaal)
5-ta ugu Sarreysa ee Xeeladaha Dhismaha Xiriirinta (Tusaaleyaal)
Dhismaha isku xidhka ayaa had iyo jeer ahaa wax-ka-beddelka mashiinka raadinta (SEO).
Si kastaba ha ahaatee, 23-kii sano ee Google ay jirtay, xeeladaha dhismaha isku xirka waxay u xuubsiibteen dhaqammo casri ah.
Markii hore, tirada isku xidhka ayaa ahayd magaca ciyaarta.
Markasta oo ay bataan isku xidhka goobtaadu, waa ay sii kordheysaa waxa ay ku jirto bogga natiijada raadinta (SERPs).
Maanta, Google waxa ay diiradda saartaa isku xirka tayada leh iyo tirada si loo hubiyo in shabakadaha bixiya macluumaadka qiimaha leh ay yihiin kuwa sare.
Isbeddelkan diiradda ayaa ka dhigay dhismaha isku xirka habraac dheer laakiin muhiim ah.
Websaydhyadu waxay u baahan yihiin xidhiidhyo tayo leh si ay u darajo qaataan, laakiin tifaftirayaasha goobta mar dambe kuma xidhna bog "sababtoo ah."
Hadda, isku-xirayaashu waa inay diiradda saaraan sidii loo heli lahaa goobo ku habboon backlinks iyo bixinta waxyaabo qiimo leh oo loogu talagalay dhagaystayaashaas.
Isku-xirayaashu waa inay waqti, fikir, iyo tamar geliyaan sidii ay u dhisi lahaayeen xeelado dhismo xiriir oo waara si ay gacan uga geystaan ​​qiimeynta mareegaha internetka ee SERPs.
Sida Loo Sameeyo Istaraatiijiyada Dhismaha Isku-xidhkaaga
Xeeladaha dhismaha isku xirka waxay qaadanayaan xoogaa shaqo ah oo hore ah, laakiin marka aad aasaaska dhigato, waxaad naftaada u dejisay guul la taaban karo.
Si aad u abuurto istaraatiijiyadaada dhismaha isku xirka, tixgeli tillaabooyinka soo socda.
Kahor intaadan go'aamin boggaga aad raadinayso ama inta xiriir ee aad helayso, waa inaad ogaataa waxa goobtaadu si fiican u qabato oo aysan si fiican u qaban.
Go'aami haddii ay tahay inaad diirada saarto backlinks ama cilmi-baarista ereyga muhiimka ah (ama labadaba). Markaad ogaato waxa ka maqan goobtaada, waxaad dhisi kartaa hanti si aad u caawiso istiraatiijiyaddaada.
Markaad fahamto dhagaystayaashaada, waxaad samayn kartaa liiska boggaga kale ee laga yaabo inay booqdaan.
Ka bilow adigoo eegaya tirakoobyada, dhaqamada, iyo danaha.
Maxay dhagaystayaashaadu daneeyaan?
Sidee bay jawaabaha u raadiyaan?
Maxay xiisaynayaan ee ku saabsan alaabtaada ama adeegyadaada?
Xisaabi macluumaadkaaga jira
Raadso qoraallada baloogga iyo bogag kale oo laga yaabo in bogagga kale ay rabaan inay ku xidhaan.
Tixgeli in mulkiilayaasha goobta badankoodu aanay ku xidhnayn boggaga alaabta, maadaama dhaqanku u muuqdo xayaysiis iyo xayaysiis.
Taa beddelkeeda, raadi boggaga ugu sarreeya ee waxbarashada ah. Kadib, fiiri waxa ku jira tartame.
Ma jiraan wax nusqaan ah?
Hadday sidaas tahay, waqti ku bixi abuurista boggagan si aad ugu tartanto raadinta.
Samee liiska goobaha bartilmaameedka ah.
Goobahani waa inay la socdaan macluumaadkaaga, ganacsigaaga, iyo dhagaystayaasha la beegsanayo. Mudnaanta ku siiye boggaga ku habboonaanta iyo awoodda - habkaas, waxaad hubin kartaa inaad marka hore garaacayso bogagga ugu muhiimsan.
Waxa muhiimka ah ee la xasuusan yahay waa in dhismaha isku xirka uu yahay geeddi-socod dheer.
Sidaa darteed, istiraatiijiyaddaadu waa inay ku jirtaa yoolalka mustaqbalka fog si aad horumar u aragto.
Xeeladaha Dhismaha Iskuxidhka vs. Xeeladaha
Kahor intaadan u boodin xeeladaha, waxaa lama huraan ah inaad ka gudubto farqiga u dhexeeya xeeladaha iyo tabaha.
Inta badan, dadku waxay ku wareeraan labadooda, iyagoo u maleynaya inay isku mid yihiin. In kasta oo ay aad isugu dhow yihiin, haddana way ku kala duwan yihiin.
Istaraatiijiyad waxaa lagu qeexaa qorshe hawleed. Caadi ahaan waxay ku lug leedahay yoolka fog iyo sida aad u gaari doonto.
Tusaale ahaan, waxaad tidhaahdaa shirkaddaadu waxay hiigsanaysaa inay kordhiso taraafikada dabiiciga ah ee mareegaha.
Hal xeelad oo aad yeelan karto ayaa ah inaad kordhiso joogitaankaaga warbaahinta bulshada.
Xeeladda, xaaladdan, maaha hadafka dhammaadka, laakiin waa hab lagu gaaro yoolka dhammaadka.
Xeeladda waxaa lagu qeexaa inay tahay tillaabada lagu gaarayo xeeladda.
Xeeladaha waxay leeyihiin waqtiyo aad uga gaaban xeeladaha waxayna leeyihiin ujeedo sax ah.
Ku sii socoshada tusaalaha istaraatiijiyadda warbaahinta bulshada, xeeladdu waxay noqonaysaa in saddex jeer toddobaadkii lagu dhejiyo goobo gaar ah oo warbaahinta bulshada ah.
Tusaalaha xeeladaha kale ayaa noqon lahaa in la abuuro muuqaalo bulsho oo badan si loo kordhiyo ka qaybgalka.
Hadda farqiga u dhexeeya xeeladaha iyo xeeladaha ayaa la sharraxay aan u daadagno xeeladaha isku xirka.
Xeeladaha Dhismaha Xiriirinta Sare
Sida xeeladaha oo dhan, waa lagama maarmaan inaad dhisto mid leh yoolkaaga dhamaadka maskaxda. Dhisidda isku xidhka waxay qaadataa wakhti, dadaal, iyo dulqaad.
Sida ololahaagu u socdo, waa inaad dib u qiimeysaa xeeladahaaga si aad u fahanto waxa shaqaynaya oo aan shaqaynayn.
Hoos waxa ah shan xeelado dhismo isku xidh ah oo aad hadda hirgelin karto.
1. Daabac Isku-xidhka-Waxyaabaha ku jira
Waa inaad abuurtaa xog ay dadku rabaan inay ku xidhidhiyaan. Mawduucyada u qalma isku xidhku waxay leeyihiin soo jiidasho ballaadhan waxayna u badan tahay inay fadhiyaan meesha ugu sarreysa marinka suuq-geynta.
Tifaftirayaasha intooda badani waxay rabaan inay ku xidhaan bogag khuseeya dhegaystayaashooda, markaa mar kasta oo boggaagu aad ugu habboon yahay dhagaystayaashooda, waa ay sii kordheysaa suurtogalnimada ay ku xiri doonaan.
Waxa ku jira isku xidhka u qalma sidoo kale waa waxbarasho iyo macluumaad. Waxay xallisaa dhibaato guud ama waxay ka jawaabtaa su'aalaha caadiga ah ee dhagaystayaashu qabaan.
Si kastaba ha ahaatee, khabiiro badan oo SEO ah ayaa dhisa isku-xirnaanta u qalanta iyaga oo ka jawaabaya su'aalaha caadiga ah.
Taasi waa in la yiraahdo, si loo helo dib-u-celinta, kaliya maahan in maadadaadu ay tahay inay ka jawaabto su'aalaha oo ay xalliso dhibaatooyinka, sidoo kale waa inay u sameyso hab gaar ah.
Tusaalooyinka nuxurka u qalma isku xidhka waxaa ka mid ah:
Xogta iyo isbeddellada.
Cilmi baaris faa'iido u leh warshadahaaga.
Waxyaabo dhiiri galinaya
Haddi istaraatiijiyadaadu ay tahay in la abuuro waxyaabo badan oo isku xidhi kara, waxaad xisaabin kartaa waxa ku jira si aad u fahanto meelaha aad ka maqan tahay.
Dabadeed, adiga oo mara hababka kala duwan ee kor ku taxan, waxa aad qorshayn kartaa nuxurka aad ku bilaabayso iyo inta aad u baahan tahay.
Wacyigelintu waa ficilka lagu weydiinayo goob xiriiriyaha dambe.
Markaad abuurto macluumaad u qalma isku xidhka, waa lama huraan inaad macluumaadkaas la wadaagto boggaga aad u malaynayso inay ka faa'iidaysan doonaan.
Helitaanka dib-u-xirnaanta boggaga maamulka sare waa hal dariiqo oo Google loogu sheego in goobtaadu tahay awoodda mawduuca.
backlinks-yadani waxay u dhaqmaan sidii "codadka kalsoonida" ee hal goob ilaa mid kale.
Intaa waxaa dheer, dib-u-celinta laga helo goobo kala duwan ayaa kaa caawin kara ballaarinta dhageystayaasha bartilmaameedka ah, u keenaya macaamiil cusub oo suurtagal ah boggaaga.
Badanaa, wacyigelintu waxay ka kooban tahay khabiiro SEO ah oo u soo diraya maqaallo tafatiraha goobta iyagoo sharxaya sababta ay uga faa'iideysan lahaayeen maqaalkooda.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo wacyigelintu ay fulin karto, oo ay ku jiraan:
Siidaynta saxaafadda si aad u hesho xiriirinta goobaha khuseeya
Kor u qaad xog cusub
Ka raadi xiriirinta macluumaadka jira
Hagaaji hadallada aan la xidhin
Wacyigelintu waxay kaa caawin kartaa abuurista xidhiidh xirfadeed oo u dhexeeya SEO-yada iyo tifaftirayaasha goobta.
Iyadoo wacyigelintu ay u ekaan karto dhaqan toos ah, waxaa jira dhaqamada ugu wanagsan ee wacyigelinta ee ay tahay inaad ka digtoonaato:
Gaar ka dhig dhammaan wacyigelintaada. Ma rabto inaad dirto fariimo guud
Ka dhig mid gaaban oo dulucda leh. Tafatirayaasha goobta ma haystaan ​​wakhti badan oo ay ku dhex maraan iimaylka dheer.
Sharax sababta ku xidhidhiyaha goobtaada ama maqaalada ay faa'iido u leedahay iyaga.
U sii qoraalka barroosinka iyaga. Sida ugu fudud ee aad iyaga uga dhigto, ayaa ka sii fiican.
3. Samee Wararka-Waxyaabaha mudan
Istaraatiijiyadani waxay u ekaan kartaa mid aan caddayn, laakiin waxaa jira faa'iidooyin badan oo ku saabsan kasbashada isku xirka shabakada wararka.
Tusaale ahaan, daabacado badan ayaa leh dhegaystayaal badan, kuwaas oo qaarkood loo wado goobtaada.
Intaa waxaa dheer, daabacado badan ayaa mas'uul ka ah booskooda, iyo xiriirinta dambe ee iyaga ka timid waxay la socon kartaa waddo dheer Google.
Iyadoo laga yaabo inaad u malaynayso in wax kasta oo shirkadu qabato loo tixgelin karo war wanaagsan, waxaa lama huraan ah in la tixgeliyo waxa khuseeya ganacsigaaga iyo daabacaada bartilmaameedka ah.
Tixgeli tabaha soo socda:
Marti gal dhacdo.
Wax ugu deeq.
Abuur badeecad ama xal cusub.
Ku dhawaaq iskaashi cusub.
Bixi deeq waxbarasho.
Kadib markaad go'aansatid xeeladahaaga wararka u qalma, waa inaad fikradaada u gudbisaa ka qaybqaatayaasha, daabacadaha, iyo xidhiidhada kale ee warbaahinta khuseeya.
Kadib, way ku caawin lahayd haddii aad ku qanciso sababta sheekadaadu ay muhiim ugu tahay iyaga iyo dhagaystayaashooda.
4. Farsamada SEO
Hal dariiqo oo aad ku heli karto xiriiriyeyaasha ayaa ah in lagu sameeyo xisaab hubin farsamo xagga dhabarka.
Mararka qaarkood xiriiryadu way jabaan.
Bogagga hoos ayay u dhacaan.
Tafatirayaasha goobtuna ma oga in isku xidhka goobtaada aanay shaqaynayn.
Markaad sameyso falanqaynta dib-u-celinta boggaaga, waxaad ku sii jiri kartaa wareegga ku saabsan sida ay backlinks u shaqeeyaan.
Xeeladaha qaar ee istiraatiijiyadan waxaa ka mid ah:
Helitaanka xiriiriyeyaasha jaban: Waxaad iimayl u diri kartaa tifaftiraha goobta xiriirka saxda ah, adigoo sheegaya qiimaha ay ku kordhineyso boggooda.
Hagaajinta 404s: Waxaa laga yaabaa inaad bixiso xiriir cusub oo bog la mid ah.
Meesha ka saarida jiheynta: Hubi in dib u hagitaan kasta ay ku xiran yihiin meesha ugu dambeysa. Mar kasta oo ay suurtogal tahay, ka saar silsiladaha jiheynta.
HTTP vs. HTTPS: Haddii aad dhawaan u haajirtay HTTPS, hubi in dhammaan xidhiidhada laga cusboonaysiiyay HTTP.
Hagaajinta dhibaatooyinkan waxay gacan ka geysataa dib-u-cusboonaynta isku xidhka hal goob ilaa mid kale.
Xiriirinta dib-u-dejinta ama isku xirka bogga 404 wax qiimo ah kuma laha; waa muhiim inaad dib u soo ceshato xiriiriyeyaashan si kor loogu qaado taraafikada dabiiciga ah ee goobtaada.
Intaa waxaa dheer, hagaajinta xiriiriyeyaashan waxay u sahlaysaa bots-ku inay gurguurtaan oo ay tilmaamaan goobtaada.
5. Hoggaaminta fikirka ah
Hogaamiyaha fikirka waa qof ku jira warshadaha oo loo arko khabiir. Waxay si joogto ah u daabacaan waxyaabo cusub oo ay keenaan fikrado cusub oo khuseeya warshadooda.
Natiijo ahaan, dad badani waxay u badan tahay inay aaminaan oo ay u adeegsadaan nuxurkooda caddayn ahaan. Markaa sida aad arki karto, in aad noqoto hogaamiye fikradeed ee warshadahaaga waxay yeelan kartaa faa'iidooyin badan.
Mawduuca hoggaanka fikirka ayaa sidoo kale caawin kara qiimeyntaada Google. Dad badan oo tilmaamaya macluumaadkaaga kheyraad ahaan, in badan oo Google ah ayaa kuugu eegi doona maamul ahaan.
Google wuxuu rabaa inuu u adeego isticmaaleyaasheeda macluumaadka waxtarka leh waxayna u maleeyeen in nuxurka hogaaminta ay ku haboon tahay jihadaas.
Si aad u noqoto hogaamiye fakar oo guulaysta, tixgeli tabaha soo socda:
Blogging martida ee goobaha khuseeya.
Ku dhajinta jawaabaha goobaha Q+A.
Abuuritaanka nuxurka warbaahinta bulshada.
Abuuritaanka fasallo onlayn ah ama shahaadooyin.
Cusboonaysiinta akhristayaasha wararka warshadaha.
Martigelinta webinar ama podcast.
Xusuusnow in hoggaanka fikirka uu ka bilaabo cilmi-baaris asal ah, dhisidda joogitaan adag, iyo la socoshada wararka warshadaha.
Xeeladda Dhismaha Isku-xidhka Si Looga Fogaado
Haddii aan ka hadalno xeeladaha isku xirka isku xirka ee shaqeeya, waa cadaalad kaliya inaad ka gudubto istaraatiijiyadda dhismaha isku xirka waa inaad ka fogaataa si kooban.
Isku dayga inaad hesho dhammaan isku-xidhyada aad suurtogal tahay maaha mid waara ama dabiici ah.
Xeeladaha istiraatijiyaddan ay adeegsato waxaa Google u eegaa dhaqamada spammy, oo haddii aad isticmaasho, goobtaada waa la ganaaxi karaa.
Xeeladahan koofiyadda madow waxa ka mid ah:
Ku laaluushida kuwa kale xiriirinta.
Isku xirka spamming ee goobaha faallooyinka
Nidaamyada isku xirka.
Jihaynta marin habaabinta
In kasta oo laga yaabo inaad u malaynayso, "links-yada badan, ayaa ka sii wanaagsan," waxaa muhiim ah in la xasuusto in Google uu mudnaanta siinayo xiriirka u dhexeeya.
Halkii aad ka heli lahayd xaddi go'an oo xiriiriye ah, isku day inaad hesho xiriiriye awood leh oo khuseeya goobtaada.
Sidii hore loo sheegay, isku xidhka dhismuhu wuxuu qaadanayaa wakhti iyo dulqaad. Ma aha hawl "dejin oo illow".
Si kastaba ha noqotee, iyada oo la adeegsanayo istaraatiijiyad si fiican looga fikiray liiska kor ku xusan iyo hirgelinta xeeladaha lagu taageerayo, goobtaada waxay noqon kartaa habka ay u kasbato dib-u-celin badan bilaha soo socda.
Cun & Dhismaha Isku Xidhka: Hagaha Qiimaynta Rajada
Sida loo Aqoonsado Tayada Goobta ee Dhismaha Isku xidhka
Sawirka sifaysan: mmmohock/Shutterstock
Khaladaadka ka warbixinta Google Search Console ee Burburinta rootiga iyo Sida xogta habaysan loo bedelay
76 [dhab ahaantii] Hal-abuurka Maalinta Jacaylka ee Instagram Qoraallo
Taurine waxaa loo cusboonaysiiyay v1.1.5 iyadoo la kordhinayo aaladaha arm64e ee iOS 14.2-14.3